Banaanbax xoogan oo maanta kadhacay Magaalada Muqdisho. | SONNA.NET
You are hereHome » Banaanbax xoogan oo maanta kadhacay Magaalada Muqdisho. Banaanbax xoogan oo maanta kadhacay Magaalada Muqdisho.
Submitted by SONNA on Mon, 22/07/2013 - 23:37
Waxa magaalada muqdisho maanta kadhacay banaanbax aad u xoogan wada qabsaday qaar katirsan wadooyinka waa weyn muqdisho ayadoo lagu soo bandhigaayo cabasho muujinayaan dad barakacayaal ah.
Banaabaxaas oo kadhacay safaaradii horay ingiriiska ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa sheegay in ka canabayaan ganacsatada gobolka banaadir oo qaarkood doonayaan in halkaas kabarakiciyaan.
Dadka banaanbaxa dhigay waxaa kujira Haween iyo dad kale oo waayeel ah waxaana ay Dowlada KMG kadal badeen in ay ka celiyaan Ganacsatada Degmada Xamar J/Jab oo doonaya in ay kasii barakiciyaan halkii ay markii hore kusoo barakaceen.
Mid kamid ah Hooyinkii Banaanbaxa dhigay ayaa iyadoo caraysan waxaa ay tiri “Dooni mayno ee hanagala qabto waxaa ay doonayaan in ay dhulkan naga bixiyaan meel aan aadno mahaysano ee hanagala qabto kuwaan duliga ah oo aan masaakiinta unaxayn.
Ugu danbeyntii Ganacsatada somaliyeed aya qorsheynaayo in halkaas kadhigan rabaan suuqyo ku ganacsadaan waxayna hada hoy u tahay dad masakaiin ah waxaana shaki kujirin in muwaadin waliba somali ah in oo aheyn qof ilaalsho hantida qaranka iyo midka dowladaha shisheeyay dalkeyna kuleeyihinn .
Cabdulaahi Cabdi Xaashicabdulaahi_heeb@hotmail.com